Saraakiil ka tirsanaa Al-shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday tuulada Kanjaroon ee gobolka J/hoose – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Saraakiil ka tirsanaa Al-shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday tuulada Kanjaroon ee gobolka J/hoose
Ilo lagu kalsoonaan karo oo aynu heleyno ayaa inoo sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay duqeymo aad u culus ka geysteen tuulada Kanjaroon ee gobolka J/hoose, halkaasi oo sida la sheegay lagu dilay 4 sarkaal oo ka tirsanaa Xarakada Al-shabaab.
Saraakiishaasi Al-shabaab ee lagu dilay duqeynta ayaa waxaa ka mid ahaa Bashiir Dheere oo sida la sheegay ahaan jiray taliye ku-xigeenka Xarakada Al-shabaab ee gobolka J/hoose iyo sidoo kale saddex saraakiil kale.
Dhamaan saraakiishaasi ayaa sida la sheegay la dilay xilli ay ku sugnaayeen banaanka tuulada Kanjaroon ee gobolka J/hoose oo si aad ugu dhaw xadka Kenya .
Dhinaca kale, bayaan kasoo baxay xafiiska taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa lagu sheegay in saraakiishaan oo ka tirsanaa Xarakada Al-shabaab lagu dilay weerar is-difaacid ahaa oo dhinaca cirka ah.
Weerarkaan ayaa ka dambeeyay kadib markii dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa la-taliyeyaal Mareykan ah oo ku sugnaa duuleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.
Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha Mareykanka ee ku sugan dalka Soomaaliya ayaa inta badan sheega in doorkooda siyaasadeed ee Soomaaliya uu kaliya yahay la talin ciidan, balse aanu ahayn inay weeraro ka geystaan deegaanada Soomaaliya.